Ogaden News Agency (ONA) – Sdodon-Guuradii Asaaska JWXO oo Siwayn Looga Xusay Xagardheere – Heeso iyo Gabayo
Sdodon-Guuradii Asaaska JWXO oo Siwayn Looga Xusay Xagardheere – Heeso iyo Gabayo
Posted by ONA Admin	/ August 24, 2014
Maanta oo Axad ah taariikhduna ay ku beegantahay 24/8/14 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xaflad aad u balaadhan oo lagu xusayay Sanadguuradii 30aad ee kasoo wareegtay aas’aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta ogadenia JWXO.
Xafladan oo ahayd mid siwayn loosoo qabanqaabiyay ayaa furantay abaare 3:30 xiliga Africada bari waxaana xaflada si habsami leh u daadihinayay gudoomiyaha faraca Iftin halgame Cabdulahi Maxamad Cumar, iyadoo ugu horaynba lagu soo dhaweeyay sh Axmad sh Xuseen oo dadweynaha meesha fadhiyay ku baraarujiyo cabsida Allaah isagoo u soo jeediyay wacdi ay dadwaynihii si aad ah uga maqsuudeen, wuxuuna sheekhu aad uga hadlay arimo badan oo uu kamid yahay jihaadka iyo samirka laga doonayo dadka muslimiinta ah.
Waxaa sidoo kale lagu soodhaweeyay kooxda KACAAN si ay uqaadaan heesta calanka Ogadenia waxayna kooxdu siwanaagsan uqaaday heestii calanka.
1. Kacaan.. (2)
Intaas kadib waxaa lagudagalay ajandayaashi shirka oo aad ubadnaa waxaana goobta laga akhriyay taariikhda ogadenia oo kooban oo uu akhriyay halgame cabdiraxmaan faarax barkhadle wuxuuna sookoobay qayb kamid ah taariikhda uu soomaray halgamadii kala duwanaa ee ogadenia.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay martidii xaflada kasoo qayb gashay oo aad ubadnayd waxaana xaflada manta kasoo qayb galay Odayaasha dhaqanka ee kudhaqan xerada xagardheere wufuud kakala socotay xeryaha Dhagaxlay iyo Ifo iyo waliba kooxaha iyo abwaanada kudhaqan xeryaha Dhadhaab.
Sidoo kale waxaa madasha xaflada ku sugnaa warbaahin farabadan oo ay kamid yihiin Wakaalada Wararka Ogadenia ONA. Qorahay media, Kalsan TV iyo ideecada star FM ee laga dhagaysto guud ahaan wadanka Kenya iyo soomaaliyaba.
Odayaashii dhaqanka ee xaflada fadhiyay khudbadana kasoo jeediyay waxaa kamid ahaa
1 ugaas maxamad khaliif
2 suldaan maxamad galaal
3 nabadoon maxamad carte baalle
4 maxamad caabi oo ah madaxa xalinta khilaafaadka ee deegaanka Faafi
5 sheekh khaddar jaamac.
Dhamaan salaadiintan ayaa soojeediyay hadalo qiiro badan waxayna dhamaantood shacab waynaha ree Ogadenia umuujiyeen taageero balaadhan waxayna ku dardaarmeen in ay dhalintu iska celiyaan cadawga kusoo duulay si ay uhelaan xoriyada oo ah waxa ugu wanaagsan ee uu qofka bini’aadamka ah kunoolaado,
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay abwaan Mukhtaar Sulub oo markuu hadanka lawareegay goobtu isu badashay sawaxan iyo murugo isku jirta wuxuuna abwaanku soojeediyay gabay aad udheer oo uu dadwaynihii kuwaydiinayay su’aalo badan oo uu abwaanku doonayay inlooga jawaabo inkasta oo uusan helin wax kajawaaba abwaanka ayaa markuu cabaar gabaygii waday waxaa qiirooday dadbadan waxaana kudaray isagii laftiisii oo taagnida kadhici gaadhay waxayna kaliftay in garbaha laga soo qabtay goobtii uu taagnaa.
3. Cagjar (3)
Intaas kadib waxaa loo kala dhaxbaxay dadwaynihii iyo kooxda Kacaan oo manta soo bandhigtay riwaayay aad uqiimo iyo qaayo badan oo lamagac baxday WAX UUNBUU QARIBAAYE HALA A’AASO QABIIL.
Kooxda ayaa riwaayadooda oo sarbeeb ubadnayd kasoo bilaabay xiligii uu gumaystihii cadaa ee ree yuru soo galay Africa iyo sidii loo kala qaybiyay umada soomaaliyeed ee lookala qaybiyay 5ta qaybood waxayna kooxdu riwaayadooda kusoo bandhigeen sidii ogadenia loogu wareejiyay gumaysiga madow ee abasiiniya iyagoo riwaayadooda sooo gaadhsiiyay tan iyo halganka manta socda ee ay JWXO caynaanka uhayso.
Guntii iyo gunaanadkii xafladii ayaa sinabad ah kusoo dhamaatay waxayna dadku isdhaafsanayeen eray halgameedyo qiimo badan waxayna isku raacsanaayeen odhaahdii ahayd Anagu umadbaanunahay Islaam Afrikada Kunoo ogadenia ladhaho Ethiopia kamatirsanin.